Kheyre oo deg deg u fara geliyay xaalad ka taagneyd Dekeda Muqdish – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku baxay xaalad qas iyo jahwareer ahaa oo ka taagnaa Dekeda Muqdisho, kaddib markii uu is-maandhaaf uu ka dhashay Gaari Kunteenar ah oo si aan sax aheyn loo canshuuray, kaasoo ay dib u celiyeen Ciidamada Booliska ee qaabilsan Ilaalinta Canshuuraha.
waxaa tuhun ka jiraa in Maamulka Kastamka Dekeda iyo Maamulka Guud ee Dekeda uu soo kala dhex galay khilaaf la xiriira habka canshuuraha, taas oo keentay in arrinta Ra’iisul Wasaaraha ay gaarto.
Ciidamada Booliska ee Ilaalinta Canshuuraha ayaa shalay dib u celiyay Gaari Konteenar ah oo ay saarnaayeen qalab Electronic ah, iyadoo Ciidamada Booliska markii ay hubiyeen waraaqihii lagu canshuuray iyo alaabtii saarneyd oo la ogaaday in aanay isla ekeyn, maadaama lacag aad u yar lagu canshuuray, alaabta Konteenarka saarnaa ay aheyd alaab aad u badan.
Arrintan oo sababtay muran weyn ayaa la sheegay inay xalay gaartay Ra’iisul Wasaaraha, iyadoo maanta isaga iyo Ku simaha Hanti dhowrka Guud ay tageen Dekeda, si ay arrinta u ogaadaan, waxna uga qabtaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku amray Maamulka Kastamka ee Dekeda inay keenaan waraaqihii ay ku canshuureen saddexdii markab ee ugu dambeysay ee laga dejiyay alaabaha, iyadoo Kusimaha Hanti dhowrka Guud uu ka dalbaday inuu arrinta baaro, si loo kala ogaado sida ay wax u jiraan.
Ku simaha Hanti dhowrka ayaa la sheegay inuu dalbaday in la siiyo 10 maalmood, si uu waraaqaha iyo ducomentiyada wax lagu canshuuro u soo kala caddeeyo, iyadoo Ra’iisul Wasaaraha uu aqbalay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Maamulka cusub ee Kastamka Dekeda ay ku soo baxday fadeexad ku aadan inay hoos u dhacday lacagihii canshuuraha la qabanayay, waxaana ay hoos uga dhacday lacagtii ay qaban jireen maamulkii hore.
Lama oga tallaabada Ra’iisul Wasaaraha uu qaadi doono, marka Ku simaha Hanti dhowrka Guud uu soo kala cadeeyo waraaqaha lagu canshuuray saddexdii markab ee Dekeda ku soo xiratay iyo alaabihii saarnaa.